सेयर बजारमा कम्पनी कसरी छनौट गर्ने ? | NewsKarobar
गृहपृष्ठ सेयर बजारमा कम्पनी कसरी छनौट गर्ने ?
सेयर बजारमा कम्पनी कसरी छनौट गर्ने ?
सबैभन्दा गाह्रो काम । सेयर बजारमा सबैभन्दा धेरै सोधिने प्रश्न । मेरो युट्युब च्यानलमा पनि धेरैभन्दा धेरैले यही प्रश्न दोहो-याउनुभएको छ । अनि फेसबुकको म्यासेन्जरमा त यस्को बाढी नै छ । सेयर बजारमा कम्पनी कसरी छनौट गर्ने होला ?
सेयर बजारमा कम्पनी छनौटका लागि मैले ‘नेपालको सेयर बजार’ पुस्तकमा केही च्याप्टर नै छुट्याएको छु- छनौट गर्ने तरिका एक, छनौट गर्ने तरिका दुई भनेर । यस्तै ‘सेयरको आधारभूत विश्लेषण’ किताबमा कम्पनी छनौटका लागि आधारभूत विश्लेषणको आधार प्रस्तुतसँगै म आफैंले राष्ट्रिय बिमा संस्थानका लागि सेयरमा लगानी गर्न तयार पारेको कम्पनी छनौटसहितको एक प्रतिवेदन पनि राखेको छु, जसमा कम्पनी कसरी छानिन्छ भन्ने वास्तविक उदाहरण छ । यी विषयवस्तु उदाहरणस्वरुप हेर्न सकिन्छ । सेयर बजारमा अथाह पैसा, सम्पत्ति र आम्दानी छ । तर, लगानी गरेर पैसा बनाउने कुरा देख्दा सामान्य भए पनि त्यति सजिलो भने होइन रहेछ ।
कहिलेकाहीँ बाटोमा हिँड्दै गर्दा कतिपय युवायुवतीले अत्यन्त्यै सुहाएको र शरीरमा मिलेको कपडा लगाएको देखिन्छ । जसले उनीहरु अत्यन्तै सुन्दर देखिइरहेका हुन्छन् । उनीहरुको सुन्दरता देखेर पसलमा गएर त्यही कपडा तपाईंले पनि लगाउनुभयो भने के तपाईं त्यति नै सुन्दर देखिनु होला ? मलाई त्यस्तो लाग्दैन । लगानीमा पनि सुन्दर देखिनका लागि तपाईंको आवश्यकताअनुसारको कम्पनी फिट हुनुपर्छ । अरुको आवश्यकताले तपाईंको आवश्यकता पूरा हुँदैन । अरुको उद्देश्य वा लक्ष्यअनुसार खरिद गरिएको सेयरले तपाईंको आवश्यकता वा लक्ष्य पूरा हुँदैन । त्यसैले पहिला आफ्नो वित्तीय अवस्था, आवश्यकता तथा लक्ष्य स्पष्ट हुन आवश्यक छ ।
जब मैले फाइनान्सियल प्लानिङ विषय अध्ययन गरेँ, यसले मेरा धेरै आँखा खोलिदियो । यसले मानिसको वर्तमान अवस्था, आवश्यकता र चाहना (लक्ष्य) लाई विभिन्न प्रकारको वित्तीय वस्तु जस्तो सेयर, ऋणपत्र, निक्षेप, बिमा, नगदले कसरी जोड्ने भन्ने कुरा सिकायो । योभन्दा बढी त मैले विगत ६ महिनाको अवधिमा अध्ययन गरेका सेयर, लगानी र कोष व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित सयौं अमेरिकी र क्यानेडियन लगानीकर्तासँग सम्बन्धित पुस्तकले सिकायो । मैले ६ महिनाभित्र जति पुस्तक पढेँ सायद त्यसअघिका १०-१५ वर्षमा पनि त्यति पुस्तक पढिन होला । पढ्ने भोक अझै मरेको छैन । यसमा कमाएका वा पैसा बनाएका वा धन थुपारेका कथामात्र थिएनन् कि ठूला लगानीकर्ताका गल्ती, सफलताका सूत्र, टाट पल्टेका उदाहरणसँगै कम्पनी छनौटका तरिका सबैको सम्मिश्रण थिए । जहाँ मिलियनमात्र नभई विलियन वा अर्बौं डलरको कोष व्यवस्थापनका कथा र उनीहरुका सफलता पनि जोडिएका थिए ।
उनीहरुका अनुभव र सफलताका कथा पढ्दा सबैले एउटै कुरालाई आधार मानेर सफल भएको पाइँदैन । जति पनि सफल भएका छन् ती सबैका कम्पनी छनौटका आ–आफ्नै आधार छन् । उदाहरणका लागि कसैले मूल्य आम्दानी अनुपात (पीई रेसियो) लाई आधार मानेर त्यसैका आधारमा पैसा बनाएका छन् । कसैले इक्विटीमा प्रतिफललाई आधार बनाएका छन् । कसैले आम्दानीको वृद्धि (इन्कम ग्रोथ) लाई आधार बनाएको पाइन्छ भने कसैले लाभांश र लाभांशको वृद्धिलाई आधार बनाएको पाइन्छ । यस्तै कोही कम्पनीको व्यवसायको प्रकृति, क्षमता र दीर्घकालीन सम्भावनालाई आधार मानेर सफल भएका छन् । कतिले एकभन्दा बढी तत्वलाई आधार बनाएर कम्पनी छनौट गरेको पाइन्छ ।
कम्पनी वित्तीय रुपमा जति राम्रो भए पनि समग्र सेयर बजारमा आउने अप्रत्यासित गिरावटले यस्ता कम्पनीको मूल्य पनि प्रभावित हुन्छ र सेयर सस्तोमा आउँछ ।
कम्पनीका प्रतिवेदन जस्तो त्रैमासिक, वार्षिक प्रतिवेदन पढ्न जानेरमात्र पनि सही सेयरको छनोट हुँदैन । त्यसभन्दा बाहेकका अन्य विभिन्न तत्वले कम्पनीले व्यवसाय टिकाइराख्न र आम्दानी तथा नाफा बढाइराख्न प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । जसमा कम्पनीको क्षमता (स्ट्रेन्थ) वा अन्य कम्पनीभन्दा फरक भएर व्यवसाय बढाउन सक्ने अवस्था खोज्नुपर्ने हुन्छ । जुन विशेषता संसारमा सेयर बजारमा सफल भएकाहरुमा पनि पाइन्छ । उदाहरणका लागि केही वर्षअघि मैले मुक्तिनाथ विकास बैंकको सेयर किन्न ब्रोकरलाई अदेश दिएँ । बैंकले बोनस वा हकप्रद सेयर दिएर बुक क्लोज भएको अवस्था थियो । बुक क्लोजपछि गणितीय रुपमा मूल्य जति हुनुपर्ने त्योभन्दा बढीमै बजारमा सेयर किनबैच भइरहेको थियो । मैले आदेश दिएको ब्रोकरले भने, ‘मलाइ त यो धेरै महँगो मूल्य जस्तो लाग्छ, किन्ने र सर ?’ मूल्य सात सयभन्दा बढी थियो । मुक्तिनाथमा मैले अन्य विकास बैंकभन्दा फरक के देखेँ भन्दा उक्त बैंकले विकास बैंकले गर्ने काम अन्यभन्दा फरक जस्तो लघुवित्तले गर्ने काम पनि गरिरहेको थियो । लघुवित्त त्यसै पनि अत्यधिक नाफाको क्षेत्र थियो । अझै पनि छ । यो बैंकको यही फरक विशेषताका कारण ब्रोकरले मलाई नकिन्ने सल्लाह दिए पनि आत्मविश्वासका साथ उक्त बैंकको सेयर किन्न भनेँ । पछि सेयर मूल्य बढेर दोब्बर भयो । मूल्य दोब्बरर भएपछि मैले केही सेयर बेचेर आफ्नो लगानी उठाएँ । बाँकी सेयर अझै पनि मसँग छ । केही महिनाअघि मैले यो कम्पनीको केही सेयर थपेँ ।
सेयरमा पैसा बनाउनेहरुको अर्को विशेषता कुर्न सक्ने क्षमता देखियो । जस्तो कम्पनी छनौटको आफ्नो निश्चित मापदण्ड उदाहरणका लागि स्थापना भएको कम्तीमा १० वर्षभन्दा बढी अवधि पुगेको हुनुपर्ने, निरन्तर नाफा बढाएको हुनुपर्ने, कम्तीमा ५ वर्ष निरन्तर बोनस सेयर दिएको हुनुपर्ने, जस्ता मापदण्ड बनाइसकेपछि बजारमा त्यसप्रकारका कम्पनी खोज्ने । आफूले चाहे वा खोजेअनुसारका कम्पनी पाएपछि एक वर्ष, दुई वर्ष वा तीन वर्ष कुर्ने । यस्को अर्थ सेलको अवस्था कुर्ने । कम्पनी वित्तीय रुपमा जति राम्रो भए पनि समग्र सेयर बजारमा आउने अप्रत्यासित गिरावटले यस्ता कम्पनीको मूल्य पनि प्रभावित हुन्छ र सेयर सस्तोमा आउँछ । यस्तो अवस्थामा उच्च संख्यामा सेयर किन्ने र होल्ड गर्ने । यस्तै किन्नका लागि मात्र नभई बेच्न पनि धैर्य गर्ने अवस्था देखियो । कतिपय कम्पनीको सेयर बिक्री गर्नैपर्छ भन्ने छैन, जसलाई वारेन बफेटले भने जस्तो सधैंभरि होल्ड गर्न पनि सकिन्छ ।
यस्तै कम्पनी छनौट गर्दा आफ्नो लक्ष्य वा अपेक्षा पनि सँगै राख्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो लगानीकर्ताका लक्ष्य फरक हुन्छन् । कतिपयले लगानीबाट नियमित आम्दानी चाहेका हुन्छन् । कतिपयले आम्दानी र सम्पत्तिमा वृद्धि दुवै चाहेका हुन्छन् । कतिपय सट्टेबाजी गर्न चाहन्छन् । नियमित आम्दानी चाहनेले ऋणपत्र, निक्षेप, नेपाल टेलिकमको सेयर किन्ने जसमा सम्पत्तिमा धेरै वृद्धिको सम्भावना हुँदैन तर आम्दानी (ब्याज, लाभांश) आइरहन्छ । आम्दानी पनि होस् र मूल्य पनि बढोस् भन्ने हो भने त्यस्तै सम्भावना भएका जस्तो बैंकिङ र बिमा क्षेत्रका कम्पनीबाट आफ्नो मापदण्डभित्र पर्ने कम्पनी खोज्न सकिन्छ । यी क्षेत्रमा व्यवसाय विस्तार र वृद्धि दुवैको सम्भावना छ । तर, उद्देश्य आम्दानी पनि होस् (लाभांश पनि पाइयोस्) र मूल्य पनि बढोस् भन्ने अनि जलविद्युतको सेयर किन्ने हो भने त्यो गलत बाटो हुन सक्छ । एउटै कम्पनीले विभिन्न आयोजना बनाउँदै गएको छ भने जलविद्युत कम्पनीमा वृद्धिको सम्भावना रहन्छ नत्र भने त्यहाँ कुनै सम्भावना रहँदैन । यी मात्र सट्टेबाजीका लागि उपयुक्त सेयर हुन् ।
प्रकाशित समय १०:१३ बजे
पछिल्लाे - अन्त्येष्टिका लागि लगिएको शिशु चल्मलाएपछि अस्पताल फर्काइयो
अघिल्लाे - बस दुर्घटनामा १० घाइते, एकको अवस्था गम्भीर